Politika manomana 2018
2016-04-12 @ 09:44 in Politika
Resaka hafa mihitsy aloha. Miverimberina foana ny antso hoe miverena aty an-Tsihanaka... na ilay hoe aza mimenomenona fotsiny ianareo any ivelany any fa raha tena te hampandroso firenena dia miverena aty Madagasikara. Eny, mety hadisoana ho anay ny tsy miverina hampandroso an'i Madagasikara... fa inoako fa tsy hampiova zavatra lehibe loatra akory ny fiverenana. Firifiry ireo niverina nefa tsy afaka manao na inona na inona akory... toa izany koa moa ireo efa tao foana fa tsy afa-mikofoka e. Vao maika loza aza satria tsy afaka miteny tahaka izay any ivelany akory noho ny delestazy :-) Koa aza mifampiantsoantso fa samia manao izay ho vitany amin'ny toerana misy azy.
Ny kajikajy politika tamin'ny fanoloana praiminisitra teo dia hoe hanomanana ny fifidianana 2018. Dia be ireo tena manao kajy tokoa hoe ho hita eo fa tsy handresy ny anay io na soloina an'iza na soloina an'iza. Dia misy ireo miezaka mandresy lahatra ny vahoakaNY hoe vao maika ireo resintsika raha iny no praiminisitra. Ny sasany moa dia faly ery milaza hoe "voaporofo izao fa tsy mamely ity fitondrana ity satria intelo niova praiminisitra ka ho resintsika io amin'ny fifidianana"... dia mikajikajy politika eo. Kanefa toa ho diso kajy daholo.
Diso kajy satria tsy mitovy ny "fototra" (base) hoy ny mpanao matematika. Ny 1+1 dia mety ho mira 2 na mety ho mira 10 arakaraka ny "fototra" ampiasaina. Ka ity kajy politika ity misy "puissance" hafa mihitsy dia ny vola sy ny fahefana izany. Na tsy ho tian'ny vahoaka aza io fitondrana io, raha mbola ny vola sy ny fahefana no hiasa dia ho reraka eo fotsiny ny mpikajy madio. Ny vahoaka madinika mety tsy ho voavidy amin'ny fifidianana intsony satria efa maranitra amin'ilay hoe hano fa adala tompo. Ka tsy hifidy Herim-po Very Maina intsony na hahazo Tee-Shirt sy vary tambim-bato aza. Ny vahoaka madinika efa tsy ho resy lahatry ny kabary tsara lahatra intsony satria tadidiny ny ngidin'izay mandat voalohany izay. Saingy tsy ny vahoaka madinika intsony no hianteheran'izay manana vola sy fahefana fa ny ambaratonga ambony kokoa. Izay no atahorana amin'ilay kajy maloto. Raha voavidin'ny eo amin'ny fitondrana avokoa ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana hanao "halabato be vata" dia tsy hisy kajy mirindra. Ka na ho zakanao avoko aza ny vahoaka dia ho gaga ianao hahita ny voka-pifidianana hoe tsisy nifidy anao akory.
Koa raha hanao kajy dia ovay ny "fototra"... na farafaharatsiny ampitovio ny "fototra" hanaovana ny kajy.
Ny fanantenako amin'ity Praiminisitra vaovao ity dia toa Katolika hono izy... ary ho an'ny Katolika dia taonan'ny famindram-po ity taona ity.